Kheyrre oo la soo shaqeeyey madaxweyne Farmaajo oo xog kale banaanla keenay. | Warbaahinta Ayaamaha
Kheyrre oo la soo shaqeeyey madaxweyne Farmaajo oo xog kale banaanla keenay.
Raysalwasaarihii ee dalka Murashax Hassan Ali Khayre ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay xaalada hubanti la’aanta ah ee Farmaajo dalka geliyay. Qoraal uu soo saaray ayaa udhignaa sidan.;-.
“Waxaan ka walaacsanahay xaaladda adag ee dalkeennu ku jiro iyo qilaafka sii xoogeysanaya ee u dhaxeeya madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra’iisul-wasaaraha xil-gaarsiinta ah Maxamed Xuseen Rooble.
Ugu dambayntii waxaan beesha caalamka oo Soomaaliya la garab-taagan hiil ugu baaqayaa in aanay ka niyad jebin xaaladda dalka balse ay nagala shaqeeyaan sidii loo hirgelin lahaa doorashooyinka dalka.”